Nagu saabsan - Yunhua Qalabka Sirdoonka Co., Ltd.
Shirkada Qalabka Sirdoonka ee Anhui Yunhua (Yunhua oo kooban)
Shirkadda Anhui Yunhua Intelligent Company (Yunhua marka la soo gaabiyo) waa cilmi-baaris iyo soo-saarid horumarineed, oo ah shirkad tiknoolajiyad soo saarta oo iibisa shaqooyin kala duwan oo ah aalado warshadaha. YOOHEART waa sumaddii ugu horreysay ee robot gudaha ah, alaab-qeybiyaha ugu horreeya ee OEM.
Robot YOOHEART waa badeecadeena ugu weyn
Robot YOOHEART waa badeecadeena ugu weyn. Maaddaama ay tahay xirfad-yaqaan robot iyo R&D waxsoosaar wax soo saar, YOOHEART robot wuxuu ka kooban yahay kooxdeena ugu fiican uguna fiican. Robotka YOOHEART wuxuu leeyahay saamiga wax-qabadka sarreeya, wuxuu macaamiisha siin karaa alxamid, shiidi, maarayn, shaabbad iyo hawlo kale oo kala duwan oo aalado warshadeed ah.
Yunhua waxay ku taal Xuancheng, Gobolka Anhui, Xuancheng waa xarunta koonfurta Anhui ee gaadiidka, Anhui-Jiangxi, isgoyska tareenka Xuanhang halkan, gaadiid ku habboon. Waxaa jira Huangshan oo ku yaal koonfurta, Shanghai, Hangzhou iyo magaalooyin kale oo bariga ah, sidaa darteed shirkadeena waxay ku raaxeysataa meel juqraafi ahaan ka sarraysa. Qaabeynta qalabka shirkadda waa heerka koowaad ee Shiinaha. Waxaan gareeynaa tiknoolajiyada muhiimka ah, waxaanna si madaxbanaan u horumarinaynaa qeybta muhiimka ah ee robot-ka - RV retarder, marka lagu daro aaladda tiknoolajiyadda ka hortagga shilalka iyo shatiyada kale.
Yunhua waxaa ka go'an inay bixiso alaab robot warshadeed oo heer sare ah oo loogu talagalay shirkadaha wax soo saarka yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah sanado badan, hagaajinta heerka otomaatiga iyo yareynta shaqada iyo kharashyada wax soo saarka oo dhameystiran. Waxaan sidoo kale siin karnaa adeegyo habeysan, tababar farsamo iyo adeeg wanaagsan kadib iibka macaamiisha iyadoo loo eegayo baahidooda si loo hubiyo in macaamil kasta oo iibsada alaabadayada uu yeelan karo dareen khibrad wanaagsan.
Aaladda loo yaqaan 'Yunhua robot' oo leh astaanta YOOHEART waxaa loo isticmaali karaa alxanka, Qabashada, jarista, rinjiyeynta, rarka iyo dejinta, isku imaatinka iwm Waxaan sidoo kale leenahay koox mashruuc noo gaar ah, oo soo bandhigi kara xalal otomaatig ah oo robot ah.
Hadafkeenu waa inaan ka dhigno warshad kastaa inay adeegsato aalado si ay ugu abuuraan qiime dheeri ah dadka isticmaala iyo bulshada! Waxaan rajeyneynaa booqashadaada iyo iskaashigaaga, waxaan noqon doonaa lammaanahaaga ugu kalsoonida badan.
Waxaan leenahay koox farsamo oo xoog leh warshadaha, tobanaan sano oo khibrad xirfadeed ah, heer naqshadeyn heer sare ah, abuurista tayo sare leh oo tayo sare leh oo wax soo saar leh.
Waxaan leenahay farsamo yaqano u gaar ah iyo qol muunad qaadis ah oo noo soo bandhigi kara tijaabooyin aad u dhaqso badan.
Waxaan had iyo jeer u soo jeedinaa dhar cusub macaamilka si loogu celiyo. iyo kula talin qaababka cusub ee khuseeya macaamiisha si ay u siiyaan dhiirigelin ku saabsan horumarka cusub.
Waxaan leenahay koox u gaar ah naqshadeynta oo badbaadin karta waqti iyo kharash badan macaamiisha.
Iyada oo la adeegsanayo silsilad muddo-dheer oo la isku halleyn karo, waxaan kula tacaamuli karnaa amarro yaryar iyo amarro raadraac leh tayo sare leh si dhakhso leh si loo yareeyo khataraha iyo keydka macaamiisha.